Sidee shabakadaha ganacsiga ee hoteelada dib ugu heli karaan SEO?
Rakibtinnimadiisa sare waxay ka duwan tahay suuqa hotelka. Taasi waa sababta dhismaha shabakadda tayada ee loogu talagalay boggaga hudheelka waa mudnaan sare.
Backlink waa hyperlink ka soo caansan shabakad kale oo tilmaamaysa domainkaaga. Dib-u-qabsi kasta waa in uu ku wareegsan yahay waxyaabaha ku habboon oo ku mashquulsan si uu u keeno gaadiidka ilaha la xariira. Intaa waxaa dheer, isku xirnaanta waa in lagu qarsoodo qoraalka ereyga leh mid ka mid ah ereyada ugu muhiimsan ee aad jeceshahay in lagu bartilmaameedsado mashiinka raadinta.
Xiriir kasta oo soo socda oo tilmaamaya bogga internetka ee ku yaala hoteelka ayaa ku siinaya codka indhaha makiinadaha raadinta. Xirfadaha tayada ee siyaada ah waxay tilmaamayaan goobtaada, awoodda aad ka heleyso makiinadaha raadinta, ka dibna ka sarreeya, waxaad ku dareysaa SERP.
Waxaa jira qulqulo badan oo dib loogu soo celiyo taas. Mashiinnada raadinta waxay tixgeliyaan algorithms badan si ay u go'aamiyaan darajadaada saxda ah ee xaqiiqda ah (xaqiiqda waxaa jira in ka badan 200 saamiyo Google). Awooda domainkaaga iyo sumcaddaada caanka ayaa sidoo kale door ka ciyaara sida qiimaha dhabarkaagu yahay.
Gaaban gaaban waxaa loogu talagalay in lala wadaago qaar ka mid ah isku dhejinta siraha si aad dib ugu hesho SEO-ga. Nidaamyadani waxay kaa caawin doonaan inaad kor u qaaddo awooda websaydhkaaga oo aad noqoto hoggaamiye suuq ah.
Siyaabaha dhabta ah ee dib loogu soo celin karo bogga internetka ee SEO
Dib u eegida tusmooyinka ganacsiga ee internetka
waxay wax ku ool u noqon doonaan ganacsiyada hudheelada kuwaas oo jeclaan lahaa inay kor u qaadaan waxqabadka degaanka.
Waa hab sahlan oo lagu helo xiriirrada soo socda. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad raadisaa hanjabaado internet oo khuseeya meesha aad ka koobnaan karto. Waxaan u maleynayaa in ganacsiyada hudheelka hotelka ay u muuqdaan kuwo dabiici ah bogagga internetka ee xaafadaha, beelaha degaanka, iyo hagayaasha ganacsiga magaalada. Waxa kale oo aad raadin kartaa warshadaha ganacsiga la xiriira, sida ururrada ganacsiga ee martigelinta iyo ururada dalxiiska.
Waxaa jira laba siyaabood oo aad ku heli karto buuggan internetka ee ganacsiga. Midka koowaad waa inuu raadiyaa raadinta Google ee su'aalahan sida "buuga isbitaallada + magaca magaalada," "liis ganacsi + magaalo magaalo," "magaalo safar + magaca magaalada," iyo sidoo kale. Hab kale ayaa ah in la sameeyo falanqaynta suuqyada ee fulinaya mid ka mid ah qalabka xirfadlayaasha ah ee internetka (MOZ Pro, Analyteth Web Analyzer, iwm.
Muuji xirmooyinkaaga khadka tooska ah
Waxaad soo saari kartaa taageerooyin tayo leh oo dheeraad ah adigoo isku dayaya in aad u wareejiso dhammaan xiriirada ganacsiga ee hadda socda dunida internetka. Haddii aad hogaamiso ganacsiyada hudheelka, waxaad leedahay saaxiibo badan iyo xiriir ganacsi oo lala yeesho ganacsiyada kale ee ay ka midka yihiin alaab-qeybiyeyaasha cuntada, shirkadaha nadiifinta, adeegyada madadaalada iyo wixii la mid ah. Inta badan shirkadaha maxalliga ahi waxay horeyba u aasaaseen ganacsigooda internetka, laakiin weli ma ogid waxa ku saabsan. Taasi waa sababta aad u hubin lahayd akhbaartaan oo aad samayso si aad u muujisid xiriiradaaga internetka ee online. Wada-hawlgalayaasha ganacsigu waxay u badan tahay inay ku faraxsan yihiin inay abuuraan xiriirro ganacsi oo is-daba-marin ah.
Waxaa intaa dheer, waxaad siin kartaa bixiyeyaashaada markhaati wanaagsan oo ku saabsan adeegyadooda. Horeyba, waxay ku qori karaan URL-gaaga bogga iibka ee liiska macaamiisha ugu mudnaanta leh ama sidoo kale qori warcelin ku saabsan shirkaddaada Source .